Angonina tsikelikely : nisondrotra 10 % ny vidin’ny fitaovam-pianarana | NewsMada
Angonina tsikelikely : nisondrotra 10 % ny vidin’ny fitaovam-pianarana
Manangona tsikelikely ny fitaovam-pianarana ny ray aman-dreny amin’izao fotoam-pialan-tsasatra izao. Vidiana mialoha ny tena mavesatra sy lafo, toy ny kahie sy ny boky ho an’ireo efa nahazo ny lisitry ny boky hampiasaina mandritra ny taom-pianarana vaovao. Nahitana fiakarany 500 Ar ka hatramin’ny 1 000 Ar ny kahie amidy eny an-tsena na any amin’ny magazay mpivarotra fitaovam-pianarana. Ny kilasy 7 ème hanala fanadinana CEPE mampiasa kahie tsy latsaky ny 15. Ny kahie 200 pejy mahatratra hatramin’ny 3 000 Ar ny iray arakaraka ny kalitao sy ny hatevin’ny fonony. Tsy ny kahie ihany fa nisondro-bidy ihany koa ireo kojakoja hafa toy ny fandokoana, ny fanipika, fonon’ny kahie.
Mitaky fitaovana tsara kalitao ny sekoly ary mametraka ny marika ilaina. Ambarany fa raha tiana haharitra hatramin’ny faran’ny taona ny kojakoja, tsy mety ny mividy ireo vita sinoa tsy mateza akory. Ho an’ny mpianatra iray, manomana 120 000 Ar ny ray aman-dreny hatokana ho an’ny fitaovam-pianarana fotsiny. Tsy mbola tafiditra ao ny boky samihafa.
Ho an’ny ivontoeram-pampianarana sasany, ho fanampiana ny ray aman-dreny, nifampirahraha tamin’ny orinasa mpanafatra fitaovana izy ireo. Amidy any an-tsekoly ireo kojakoja ilaina amin’ny vidiny latsaka ambany kokoa raha mitaha amin’ny any an-tsena.
Rehefa mandia taom-pianarana vaovao, betsaka ny ray aman-dreny manana fahazarana mividy akanjo, kiraro, kitapo vaovao koa hiatrehana ny taona. Manoloana ny fahasahiranana anefa, ny fitaovana aloha no tena mahamaika fa afaka mandefitra ny ambiny, hoy ny renim-pianakaviana iray.